Posted on फ्रेवुअरी 11, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
पोखरा, माघ २८- झरीले ह्वात्तै बढेको चिसो, अनि आधा खुलेको हिमाल। चसोचिसो सिरेटोसँगै लागेको चहकिलो घाममा रमाउँदै थिइन्, हिरोइन मनीषा कोइराला। कोइरालासँगै कम्मर मर्काउँदै थिए हिरो राजेश हमाल। चिसो भए पनि मनीषालाई पोखराको आकर्षक दृश्यले लोभ्याएको थियो।
‘आज त साह्रै राम्रो दिन परेछ, पोखरा ‘ब्युटिफुल’ देखिएको छ,’ कोइराला भन्दै थिइन्। पोखरास्थित फुलबारी होटल परिसरमा बुधबार नेपाली फिल्म ‘धर्मा’को गीतको सुटिङ हुँदैथियो। ‘चोरियो, चोरियो आँखैको सामु यो मेरो मन चोरियो’ बोलको गीतमा हमाल र कोइराला नाच्दै थिए।
नेपाली फिल्म ‘धर्मा’मा अभिनय गर्न मनीषा केही दिनदेखि काठमाडौंमा छिन्। सोमबार त्यही फिल्मको सुटिङ गर्न मनीषा पोखरा जाँदैथिइन्। त्यसैले ‘गर्ल्स’को कार्यक्रममा उनी आउँदिनन् कि भन्ने अनुमान धेरैको थियो।
आयोजकले पूर्व निर्धारित समयमा मनीषा आउन नभ्याउने भएपछि कार्यक्रमको समय तीन घन्टा अगाडि सारेका थिए। सबै निम्तालुलाई यो हेरफेरको सूचना दिन आयोजकले भ्याएनन्। कार्यक्रममा अरू निम्तालुभन्दा सञ्चारकर्मीकै उपस्थिति बाक्लो हुनुको कारण यही थियो। आधा घन्टा कुर्दा पनि मनीषा नआएपछि केही सञ्चारकर्मी र निम्तालु कार्यक्रमबाट फर्किए। कार्यक्रमस्थलमा आएका हरेक गाडीतिर आयोजक र सञ्चारकर्मीको आँखा पुग्थ्यो। र, मनीषालाई नदेखेपछि सबै निराश बन्थे। टेलिभिजन पत्रकारहरूले चाहिँ ‘आउने भनिए पनि मनीषा आइनन्, सञ्चारकर्मीहरू रित्तो हात फर्किए’ भन्ने कोणबाट समाचार बनाउन त्यस्तै दृश्य क्यामरामा कैद गराउँदैथिए।
करिब एक घन्टापछि खरानी रङको एउटा कार तीब्र गतिमा हुइँकिएर आइपुग्यो, ‘पार्किङ पछाडि’ लेखेको बोर्डलाई ठक्कर दिँदै। सबैको ध्यान कारतिर मोडियो। फोटो पत्रकार र क्यामराम्यानहरू जर्‍याकजुरुक उठे। कारको पछाडिपट्टिको देब्रे ढोकाबाट प्रकट भइन्, मनीषा। उनको गुलाबी पहिरन र मुस्कानसहितको ‘नमस्ते’ले सबैको मुहार उज्यालो बन्यो।
उनी गेटबाट तुरुन्तै उक्लिन पाइनन्। क्यामराले घेरिन र छेकिन पुगिन्। झन्डै एक मिनेट क्यामराहरू ख्लिक् ख्लिक् भएपछि उनले सोधिन्, ‘कता?’ आयोजकले ‘माथि’ भन्दै उनलाई डोर्‍याएर लगे। र, प्रवचन कक्षमा पुगेपछि उनलाई कार्यक्रम सञ्चालिका मानवी ढकालले स्टेजमा बोलाइहालिन्। स्टेजमा बसेकी मनीषाको फोटो खिच्न क्यामरावालाहरूको ठेलमठेल चल्यो। फोटोग्राफरहरूको ‘पर्खाल’ले गर्दा अरू निम्तालु र सञ्चारकर्मीले दुई मिनेटसम्म मनीषाको अनुहार देख्न पाएनन्।
मनीषासँग धेरै समय थिएन। त्यसैले ‘गर्ल्स’ फिल्मका निर्देशक प्रिन्स र रिपोटर्स् क्लबका ऋषि धमलाले बोलेपछि मनीषालाई पालो दिइयो। ‘एकदम राम्रो विषयमा फिल्म बनाइरहनु भएको छ, त्यसैले क्लासिक फिल्म बनाउनुहोला,’ मनीषाले भनिन्, ‘हामीले बलिउडको कपी गर्नु पर्दैन, आफ्नै कथा र संस्कृतिमा बनाए हुन्छ।’
नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै सदुपयोग गर्नसके फिल्म राम्रो बन्ने धारणा मनीषाले पोखिन्। भनिन्, ‘लुक्लालाई हेर्नुस्, कति राम्रो छ त्यो ठाउँ, त्यस्तैत्यस्तै लोकेसन फिल्ममा देखिनुपर्‍यो।’
आफूले खेलिरहेको ‘धर्मा’ फिल्मको ’boutमा बताउन अनुरोध गर्दा उनले भनिन्, ‘यो फिल्मको ’boutमा निर्माताहरूले मलाई केही नबोल्नू भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यस’bout बताउनुहुनेछ।’
‘राम्रो कथा छ भने अरू नेपाली फिल्ममा पनि अभिनय गर्छु,’ उनले आफ्नो पारिश्रमिकको ’boutमा भनिन्, ‘यताको फिल्म खेल्दा यहाँकै बजेटमा काम गर्छु।’ उनले नेपाली फिल्म निर्माण गर्ने कुरा बेलाबेला बताउँदै आएकी थिइन्। सोमबार पनि उनलाई यस’bout सोधियो। उनको जवाफ थियो, ‘एउटा सपना छ तर निर्णय गरिसकेकी छैन।’
नेपाली फिल्मको मौलिकतामा उनी पटकपटक जोड दिइरहेकी थिइन् र जाँदाजाँदै सुझाव दिइन्, ‘नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा पनि लैजानुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रो कल्चर र हाम्रो लिभिङ स्टाइलमा फिल्म बनाइनुपर्छ।’ ‘ल है’ भन्दै मनीषा हलबाट बिदा भइन् र कार चढेर बाहिरिइन्। उनीसँग फोटो खिचाएका फ्यानहरू भने कार्यक्रमस्थलमै आ-आफ्ना क्यामरा ‘रिप्ले’ गरेर हेर्दैथिए, जहाँ उनी अझै फरकफरक मुस्कान छर्दै थिइन्।
« ‘मलाई नानाथरी एजेन्ट भनियो’ :-स्व.जमिम शाह। पाँच दिनपछि जमिमको अन्त्येष्टि »